Compost Ime igwe, Compost Turner Machine - Tagrm
Nanning Tagrm Co., Ltd bụ ọkachamara na ịmepụta na ịmepụta ngwa ngwa compost dị iche iche, akụrụngwa nke gbaa ụka na nchekwa gburugburu ebe obibi. Site na afọ 30 nke nyocha na mmepe na-aga n’ihu, yana uru nke obere oriri, nrụpụta dị elu na nsonaazụ ozugbo, ngwaahịa TAGRM enweela mmeri karịa mba 30
Tọrọ ntọala na 1997
Ihe karịrị 13000 square mita
Ihe kariri ngwaahịa 15
Ihe karịrị mba iri isii
China nnukwu compost igwe n'ihi na anụ ụlọ ehi ...
OA compost Ndinam igwe n'ihi na anụ ụlọ ezi mmadụ ...
AKWECKWỌ AKWECKWỌ AKWORKWỌ STORNG
Otu teknụzụ TAGRM bụ ezigbo ndị otu egwuregwu nwere ọtụtụ afọ na ahụmịhe ọkachamara. Iji gboo mkpa nke ahịa, TAGRM ga-elekwasị anya na iwuli ndị otu talent.
Arụmọrụ pụrụ iche
TAGRM ndị na-atụgharị ikuku na-adabara obere obere na compost. Ha nwere ezigbo arụmọrụ dị ka arụmọrụ dị elu, na-adịgide adịgide ma sie ike, ọrụ nchekwa na nchekwa, wdg.
Ọrụ TAGRM na-ere ahịa mgbe a na-atụgharị compost na-agụnye ntuziaka ndị ọkachamara na teknụzụ, ntinye nke akụkụ ndị ọzọ, ndozi oge, wdg.